Weydii khabiir: Waa maxay sababta la-dagaalanka arrimaha go'doominta bulshada - Cunnooyinka ku socda wheels
Waxaan kala hadalnay Erica Berger, daaweeye shati u leh Allina Health, arrinta ku saabsan go'doominta bulshada iyo sida ay ula xiriirto shaqada Cunnooyinka Gawaarida. Digniinta Qaswadayaasha: Markaad ka caawinayso bulshada iskaa wax u qabso, ma aha kuwa aad u adeegayso oo keliya kuwa ka faa'iidaya.
Maxay muhiim u tahay in aan xoogga saarno yareynta kalinimada ama go'doonka bulshada?
Aad bay muhiim u tahay in aynu, bulsho ahaan, aynu diiradda saarno arrintan maadaama natiijadu ay dhaawacayso caafimaadka iyo ladnaanta. Bini'aadam ahaan, waxaan nahay kuwo adag ilaa dhalashada si aan ula xiriirno kuwa kale. Waa habka badbaadada in la raadiyo isku xidhka oo loo dareemo in aan ka tirsanahay oo si dhab ah loo arki karo qofka aan nahay. Cilmi baaris ayaa muujisay in kalinimadu ay saameyn xun ku yeelan karto maskaxda, dareenka iyo caafimaadka jireed ee qofka.
Sidee ayay dareenka gooni-isu-taagga ama kalinimadu ugu xidhan yihiin caafimaadka jidhka?
Cilmi baaris ayaa muujisay in waayo-aragnimada dheer ee kalinimada ay keento niyad-jabka, walaaca, iyo cilladaha hurdada. Intaa waxaa dheer, walbahaarka jidhka ee ka dhasha kalinimada waxay horseedi kartaa khatarta sii kordheysa ee istaroogga, wadna xanuunka, buurnaanta, xanuunka joogtada ah ama ba'an, iyo xitaa dhimasho.
Tabaruciddu ma kaa caawin kartaa inaad dareento inaad ku xidhan tahay bulshadaada?
Dhab ahaantii. Iskaa wax u qabso waa hab fiican oo lagu dareemo ku xiran dadka kale iyo in la dhaqaajiyo xarumaha abaalmarinta ee maskaxdeena.
Waxaan ka maqalnaa tabaruceyaashayada iyo dadka cunnada hela in is dhexgalka yar ee ka yimaada joojinta cuntada ay caawiso mutadawiciinta iyo qaataha cuntada labadaba inay dareemaan inay ku xidhan yihiin deriskooda. Waa maxay sababta is dhexgalka gaaban uu u samayn karo farqi intaa le'eg?
Furaha isdhexgalkan kooban waa meesha la wadaago - isku xirka iyo naxariista loo hayo wanaagga qof kale. Dareenkan isku xidhka ahi waxa uu keenaa isbeddello jidheed oo jidhkeenna ah, oo ay ku jirto firfircoonida qaybta maskaxdeenna oo ka jawaabaysa helitaanka abaal-marin ama raaxaysi. Waxa yaabka leh ayaa ah in badan oo aynu la kulano isbeddelladan jidheed, in badan ayaa nalagu kaxeeyaa si aanu u noqono xidhiidh aad u badan oo u naxariista dadka kale.
Dhaqan ahaan, waxaa jira bulsho si dabiici ah loo wadaago oo ku wareegta cuntada. Tani waa run xitaa marka cuntada aan si wadajir ah loo wada cunin, laakiin waxaan si fudud isugu xireynaa hadiyadda nafaqeynta. Waxaan rumaysanahay in tani ay si togan u kordhinayso waayo-aragnimada gaarka ah ee barnaamijyada Cunnada Ku-taagga Taagerada iyo habka ay u caawiyaan isku xirka dadka.
Haddii aad dareento kelinimo ama go'doon, maxaad samayn lahayd?
Waxyaalaha qaarkood ee kaa caawin kara la dagaallanka kalinimada ama kelinimada waxaa ka mid ah:
1. Ku biirista fasal ama naadi (tani waxay noqon kartaa qof ahaan ama mid toos ah) - Tani waxay ku siinaysaa shay meesha ay jirto awood lagu xidhiidho danaha ama waayo-aragnimada la wadaago.
2. Iskaa wax u qabso - Tani waxay gacan ka geysataa shidaalka isku xirka waxayna dhaqaajisaa jawaabta maskaxeed ee togan ee nidaamyadayada.
3. Xooji cilaaqaadka jira - Kelinimadu waxay mararka qaarkood keeni kartaa dareen xishood, taas oo nagu kallifta inaan sii fogaanno. Aad bay muhiim u tahay in aan la dagaalanno ceebaha annaga oo aqoonsanayna waayo-aragnimadeena (kelinimadu waa dareen caadi ah oo bini'aadam ah) oo aan raadinno in aan la xiriirno cilaaqaadka jira ee nolosheena.
4. Ku korso xawayaanka ama iskaa wax u qabso ee hoyga xayawaanka - Waxaa jira cadaymo cajiib ah oo ku hareeraysan saamaynta togan ee xidhiidhka xitaa xayawaanka taas oo gacan ka geysanaysa yaraynta dareenka iyo saameynta kalinimada. Ma aha taas oo kaliya, laakiin xayawaanka rabaayada ah ayaa si dabiici ah naga caawin kara in aan la xiriirno dadka kale ee ku saabsan danaha la wadaago (haddii la ordayo dadka marka ay socdaan eyga, la falgalka tabaruceyaasha kale inta lagu jiro hoyga degaanka, iwm.).
5. La hadal shisheeyaha - isdhexgalka yar ee dadka ka dhexeeya waa muhiim! La falgalka dadka kugu xeeran ayaa tani taageeri kartaa.
6. Raadi daaweyn - Kelinnimo (waxay kuxirantahay xoojinta iyo muddada), waxay keeni kartaa ceeb weyn waxayna noqon kartaa caqabad si loola dagaallamo. Raadinta daawaynta waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo tan laga sii shaqeeyo, lagana shaqeeyo ceebta iyo shucuurta kale ee adag, oo la helo qalab dheeraad ah oo lagu taageero kobcinta xidhiidhada togan.
La shaqaynta Allina Health si loola dagaallamo kalinimada bulshadeena
Allina Health iyo Meals on Wheels ayaa iska kaashanaya si ay u dhisaan xiriir qoto dheer oo ka dhexeeya iskaa wax u qabso, qaataha cuntada, iyo daryeel bixiyaha iyada oo loo marayo codsiga moobiilka ee diirada saaraya macmiilka iyo wadaagista agabka hindisaha caafimaadka Allina, Hello4Health.
Hello4Health waa kheyraad online ah oo loogu talagalay in lagu dhiso ama lagu xoojiyo xiriirka bulshada ee nolosheena, iyada oo bixisa waxqabadyo madadaalo leh oo lagula xiriiriyo kuwa kale iyo talooyin si loo fududeeyo isku xirnaanta dadka da 'kasta leh. Wax badan ka baro hello4health.org.
Sidoo kale qayb ka mid ah iskaashiga, Allina Health waxa ay ku taageertay Cunnooyinka Wheels oo ay siisay deeq deeqsinimo ah oo ku xidhi doonta bukaannada Allina Health ee xaqa u leh Cunnada Taayirada iyada oo daboolaysa kharashka labada toddobaad ee ugu horreeya adeegga cuntada.
43 boqolkiiba dadka qaangaarka ah ee da'doodu tahay 60 ama ka weyn ayaa sheegay inay dareemayaan kalinimo sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Akadeemiyada Qaranka ee Sayniska, Injineerinka, iyo Daawada. Go'doonka bulsheed iyo kalinimada dadka waaweyn ee waaweyn ayaa lala xiriiriyaa kororka suurtagalnimada dhimashada hore, waallida, cudurrada wadnaha, iyo natiijooyinka kale ee caafimaadka maskaxda iyo jirka ee taban. Way fududahay in la iloobo sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo cilaaqaadka, iyo in badan oo ka mid ah deriskeena gabowga ah ayaa waqtigooda ku qaata guriga iyo kaligood.